Sida Loo Dhiso Jaranjarada CD -ga Sannadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Talaabo Talaabo Fudud
Bogga ugu weyn Sida Loo Dhiso Jaranjarada CD -ga Sannadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Talaabo Talaabo Fudud
Waa Maxay Jaranjarada CD -ga?
Maxaan U Dhisayaa Jaranjarada CD?
Sida Loo Dhiso Jaranjarada CD: Tallaabooyin Fudud
Tallaabada 1. Fur CD -yada bilowga ah
Tallaabada 2. CD kasta cusboonaysii marka uu bislaado
Waa Maxay Faa'iidooyinka Dhismaha Jaranjarada CD -ga?
Ma Jiraan Waxyeelo U Leh Dhismaha Jaranjarada CD -ga?
Miyaan Abuuri Karaa Jaranjarada CD -ga Hadafka Dhexe?
Ma rabtaa inaad barato sidaad ukuntaada ugu ridi karto dambiilayaal ammaan oo kala duwan oo tarma oo meel siiya dib -u -maalgelinta? Baro sida loo dhiso salaanka CD -ga maanta.
Ku gelinta dhammaan lacagahaaga hal CD waxay kordhineysaa fursadahaaga inaad ku weydo koror dulsaarka dulsaarka taasi waxay dhacdaa marka lacagtaada la xiro.
Iyada oo leh jaranjarada CD-ga, waxaad ka faa'iidaysan kartaa dulsaarka muddada-gaaban adiga oo dib-u-maal-gelinaya faa'iidooyinka CD-yada bislaaday ee CD-yada cusub ee leh dulsaarka sare. Dhinaca kale, haddii dulsaarku hoos u dhaco, waxaad weli ku raaxaysanaysaa faa'iidooyinka dulsaarka sare ee CD-yadaaga fog ee jira ay bixiyaan.
Kahor intaanan ku tusin sida loo dhiso jaranjarada CD -ga iyada oo aan cidhiidhi lahayn, bal aan u qeexno sallaan CD ah annagoo sharraxayna sababaha ay tahay inaad u dhisto sallaanka CD -ga.
Jaranjarada CD -ga waa xeelad maalgashi oo kuu oggolaanaysa inaad ku maal gashato CD -yo shaqsiyeedyo kala duwan oo leh taariikho qaan -gaar ah. Si kale haddii loo dhigo, waa a xeeladda kaydka inay si siman ugu fidiyaan lacag caddaan ah shahaadooyinka kala duwan ee deebaajiga si ay uga helaan sicirro sare oo ka soo xarooday CD-yada muddada dheer iyada oo sii daynaysa qaybo ka mid ah lacagtaas waqtiyo gaaban.
ARAG SIDOO KALE: Shabakadaha Talooyinka Maalgashiga ee ugu Fiican ee leh Xogta Wakhtiga
Tusaale ahaan, waxaad u qaybin kartaa lacagtaada si isku mid ah si aad u furto CD hal sano ah, CD laba sano ah, iyo CD saddex sano ah isku mar si aad u dhisto jaranjarada CD ee saddexda sano ah.
Istaraatijiyad jaranjarada wax-ku-oolka ahi waxay ilaalin kartaa xoogaa xoogaa ah marka ay soo saarto soo-celin weyn marka la barbar dhigo duubista CD-ga ee muddada-gaaban.
Miisaaniyadaha la maal -galiyay, kuwaas oo ay caymiskoodu gaarayaan $ 250,000 oo ay bixisay Hay'adda Caymiska Kaydka ee Dawladda Federaalka (FDIC), waxaa sugay bangiga soo saaray ilaa taariikhda qaan -gaadhka ee CD -ga.
Taariikhaha qaan -gaadhka ee qalabyadan kaydinta ayaa sida caadiga ah laga dhigay saddex bilood, lix bilood, hal sano, ama shan sano. Ereyga sare ee maalgelinta loo qoondeeyey ayaa sare u kacaya dulsaarka.
LA XIDHIIDH BADAN: 10 Kaydka Abaalmarinta Sare ee Khatarta Yar | Maalgashiga Hantida
Jaranjarada CD -ga ayaa qofka ka caawisa inuu dhiso wax la qiyaasi karo maal-gashiga soo noqosho. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku siinaysaa awood aad ku kasban karto soo-celin wanaagsan, oo ka duwan CD-ga muddada-gaaban ah.
Adigoo ku faafinaya lacagahaaga CD -yada kala duwan, sallaanka CD -ga ayaa ku siinaya dabacsanaan. Qayb ka mid ah lacagtaada ayaa la heli karaa mar kasta oo mid ka mid ah CD -yadaagu qaangaadho. Intaa waxaa sii dheer, waxaad awoodi kartaa inaad ka faa'iideysato qiimayaasha CD-yada muddada-dheer, kuwaas oo sida caadiga ah ka sarreeya, adigoon ku bixin dhammaan lacagtaada CD-gaas.
ARAG SIDOO KALE: Sida lacag looga helo kaydinta 2022 | Talo Run ah
Dhismaha CD sallaan ma aha wax adag. Xitaa adiga ayaa samayn kara adiga oo fura CD -yo shuruudo kala duwan leh. Bangiyo badan ayaa xitaa kuu oggolaanaya inaad habka ku dhammayso internetka. Haddii aad u baahan tahay kaalmo dheeraad ah, bangi ama dillaal ayaa had iyo jeer u joogi doona inuu ku caawiyo.
Waa kuwan tillaabooyinka la raacayo si loo dhiso sallaan CD:
Jaranjarada CD -gu waxay u baahan tahay in maalgelintaada si siman loogu qaybiyo dhawr CD oo dherer kala duwan leh oo leh taariikho qaan -gaar ah. Qaabka jaranjarada CD -ga ee caadiga ah wuxuu leeyahay shan “jaranjaro” oo leh shuruudo CD ah oo kora hal sano illaa shan. Haddii aad haysato $ 10,000 oo aad ku maalgashato, waxaad u kala bixin lahayd lacagtaada sidan:
$ 2,000 oo ku jira CD hal sano ah
$ 2,000 oo ku jira CD laba sano ah
$ 2,000 oo ku jira CD saddex sano ah
$ 2,000 oo ku jira CD afar sano ah
$ 2,000 oo ku jira CD shan sano ah
Marka CD-ga qaangaadho, waxaad lacagta ku ridi kartaa CD shan sano oo cusub ah. Shan sano kadib, sallaankaagu wuxuu lahaan doonaa shan CD oo shan-sano ah, midna wuu bislaadaa sannad kasta.
Waa tan sida ay u ekaan doonto:
$ 2,000 + hal sano oo xiisaha CD shan sano ah
$ 2,000 + laba sano oo xiisaha CD shan sano ah
$ 2,000 + saddex sano oo xiise ah CD shan sano ah
$ 2,000 + afar sano oo dulsaar ah CD shan sano ah
$ 2,000 + shan sano oo dulsaar ah CD shan sano ah
Dabacsanaantu had iyo jeer waxay timaaddaa ciyaarta marka CD kasta bislaado. In kasta oo sallaanka CD -gu shaqeeyo iyadoo dib -u -gelinta lacag kasta CD -ga cusub ugu yaraan hal mar, waxaa laga yaabaa inaad jajabiso jaranjarada haddii sicirradu aad u hooseeyaan ama yoolka kaydkaagu is -beddelo. Markay sidaas tahay, waxaad dooran kartaa koonto kale oo loogu talagalay lacagahaaga, sida keydka ama koontada dilaalnimada.
Jaranjarada CD -ga ayaa bixiya faa'iidooyinka soo socda:
Helitaanka oo kordhay: Lacag caddaan ah ayaa laguu heli doonaa waqtiyo joogto ah Xusuusnow in CD -yadu leeyihiin ciqaab bixitaan hore haddii aad jebiso shaabadda ka hor intaan muddadu dhammaan.
Fahmidda: Jaranjarada CD -gu waxay kuu oggolaanaysaa inaad kala qaybiso maalgelintaada iyo inaad dib u maal -geliso mar kasta oo CD -ga bislaado.
Heerarka dulsaarka ee wanaagsan: Adigoo wata sallaanka CD-ga, waxaad awoodi doontaa inaad ku doorato CD-yada muddada-dheer leh qiime sare oo aad weli haysato shahaadooyin si joogto ah u koraya. Waqtiga CD -ga oo dheeraada - marmarka qaarkoodna deebaajigaaga oo sii weynaada - ayaa sare u kacaya sicirkaaga.
Waa guul-wadaag: Haddii dulsaarku sarreeyo, waxaad heli doontaa lacag caddaan ah oo aad ku maalgelin karto CD -yo cusub. Haddii sicirradu hoos u dhacaan, weli waxaad haysataa lacag lagu maalgeliyay CD-yada muddada-dheer oo la socda qiime sare.
Saadaalin: CD -yada ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan ururada raba badbaadada iyo saadaalinta.
Khasaaraha ugu weyn ee CD -ga ayaa ah in dakhligaaga la habeeyay oo laga yaabo inaad seegto inaad kasbato soo -celin sare oo ah nooc maalgashi oo aad u daran.
In kasta oo heerka dulsaarka CD -yadu uu aad u sarreeyo, CD -yada lama yaqaan inay bixiyaan dulsaarka ugu sarreeya. Marka, haddii hadafkaagu yahay inaad kasbato soo -celin weyn oo aad dhisto hanti aad u badan, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad tixgeliso xaglo kale oo maalgashi oo leh awood koboc weyn. Tusaale ahaan, qof doonaya inuu kaydsado hawlgabku wuxuu had iyo jeer tagaa koonto faa'iido u leh cashuurta oo ku maalgelisa kaydadka kala duwan ee kaydka.
Run ahaantii, samaynta CD sallaan waa istaraatijiyad maalgashi oo muddo dheer ah. Tani waa sababta oo ah waxaad u baahan doontaa inaad dib u maalgeliso kaydka cusub iyo CD -yada qaangaarka ah muddo sannado ah gudahood. Marka, haddii aad damacsan tahay inaad u abuurto jaranjarada CD -ga hadafka dhexe, waxaa laga yaabaa inaad dib u eegto.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto guri iibso shan sano gudahood, oo aad haysato $ 10,000 ilaa hadda, ka fiirso inaad geliso $ 6,000 CD-ga 5-ta sano ah, iyo $ 1,000 sanduuqa CD-ga 1-4.
Sannad kasta, waxaad dib u maalgelin doontaa faa'iidooyinka CD -yada bislaaday ee CD -yada cusub oo leh dulsaar sare oo qaangaadhi doona sannadka aad u baahan tahay kaydkaaga. Tusaale ahaan, ka dib sannadkaaga koowaad, waxaad ku maalgelin doontaa $ 1000+ dulsaarka CD -gaaga ugu horreeya iyo kayd kasta oo cusub CD -ga 4 sano ah.
Shan sano ka dib, dhammaan maalgashiyadaada ayaa isla mar wada bislaanaya, waxaadna iibsan kartaa guri.
Jaranjarada CD -ga waa istaraatijiyad qurxoon oo kuu oggolaaneysa inaad CD -yadaada u qeybiso qaan -gaaryo kala duwan. Waxay kuu sahlaysaa inaad ka faa'iidaysato dulsaarka sare ee la xidhiidha maalgelinta muddada-dheer waxayna sidoo kale ku siinaysaa helitaanka lacagtaada oo joogto ah.
Sidan oo kale, jaranjarada CD -gu waxay u noqon kartaa hab weyn maalgashadayaasha inay u qorsheeyaan berri ama u keydsadaan iibsashada waaweyn.
bankrate.com - sallaan CD: Waa maxay iyo sida loo dhiso mid
nerdwallet.com - Waa Maxay Jaranjarada CD -ga?
Investopedia.com - sallaan CD
daahfur.com - Ku Kordhi Ciyaarta Kaydkaaga sallaan CD ah
Suuqa Lacagta vs Shahaadada dhigaalka: keebaa fiican?
Hantida Soo Saarka Dakhliga Ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad aado
Dib -u -eegista Deyn -qaadaha 2022: Sharci ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Faallooyinka Maalka Facet 2022: Sharci ama Fadeexad | Faa'iidooyinka | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Si taxaddar leh u akhri maqaalkan oo la wadaag asxaabtaada sidoo kale. Xogtu waa iftiin !!
Ninku wuxuu dhigaa quraacdiisa meesha uu rabo inuu ka cuno. Dumebi waa soo -saare ka kooban Maktabadda Wareegga, iyo sidoo kale soo -saare ka kooban Madasha Deeq -waxbarasho ee Adduunka. Waxaan wax ka qoraa lacagta iyo hacks -ka ku xeeran.
10 Amaahiyeyaasha Lacagta adag ee ugufiican iyo sida ay ushaqeeyaan 2022
Faallooyinka Stash 2022: Sharci ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
TALLAABADA AAD UGU NOQONAYSO DHAQAALIYADEED
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Xasilloonida Maaliyadeed
La-taliyaha Maaliyadda vs Maareeyaha Dhaqaalaha: Dulmar, Farqiga, iyo Waxyaallaha la mid ah
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay lataliye maaliyadeed? Shuruudaha laga rabo inaad noqoto lataliye maaliyadeed Mas'uuliyadaha lataliyaha maaliyadeed Faa'iidooyinka…
Dib u eegis cusboonaysiinta amaahda 2022: Sida ay u shaqeyso | Legit Ama Fadeexad